शुक्रवार, बैशाख ८, २०७४ 1508 पटक पढिएको
निर्वाचन आयोग वैशाख ३१ को लागि घोषित स्थानीय तह निर्वाचनको सुनिश्चितताको लागि प्रतिबद्ध देखिन्छ । यस क्रममा आयोगले निर्वाचनको लागि आधारभूत पूर्वसर्त मानिने सुरक्षा वातावरणलाई प्रतिकूल असार पार्ने खालका अभिव्यक्ति दिएबापत गृहलगायत अन्य केही मन्त्रीहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
आचारसंहिता उल्लंघन नगर्न पनि उसले मन्त्रीहरू र खासगरी पार्टी नेताहरूसँग आग्रह गर्दै गएको छ । तर निर्वाचनको वातावरण नबिथोल्न र सबै राजनीतिक दलहरूप्रति समान व्यवहार ‘देखाएको' देखिन निर्वाचन आयोगले पनि तदनुसारको आचरण र चरित्र देखाउन आवश्यक छ । खासगरी निर्वाचन आयोगमा जतिसुकै दक्ष सदस्यहरू भरिए पनि उनीहरूलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीको बिल्ला भिराएर सदस्य बनाइएकाले आफू आबद्ध दलहरूको हित साधनमा आयोगका सदस्यहरू नलाग्लान् त ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछ । आयोगका सदस्यका मन्तव्य र गतिविधिलाई ती आशंकाको घेरामा राखेर हेरिन्छ ।
निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व नपाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र आयोगबीच अहिले जुहारी चलेको छ । राप्रपाको विधानबाट एकतर्फी रूपमा ‘संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र' प्रतिको प्रतिबद्धतासम्बन्धी प्रावधानलाई आयोगले एकतर्फी रूपमा हटाएपछि देखा परेको यो तीक्तताले निर्वाचनको लागि अनुकूल वातावरण बनाउन मद्दत पुर्‍याउँदैन । आयोगले निर्वाचनपछि यसमा समीक्षा गर्ने बताएर ‘मरेपछि औषधी' को आश्वासन या कुनै दलविशेषको मान्यताप्रति संवेदनहीनता देखाएको छ ।
के ती मुद्दाहरूकै आधारमा मत माग्दै आएको पार्टीको विधानलाई आफूखुसी समय र शैलीमा एकतर्फी रूपमा हटाउने अधिकार आयोगलाई प्राप्त छ ? यदि राप्रपा धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रात्मक संविधानविपरीत गएको आरोपप्रति आपत्ति छ भने त्यो प्रावधान सच्याउने या कानुनी उपचार खोज्ने पहिलो अधिकार राप्रपाको बन्न जान्छ, बहादुर भवनको हैन ।
दोस्रो, बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति नेपालले र अन्य केही पार्टीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको माग राख्दा त्यसलाई आयोगले संविधानको मान्यताविपरीत भएको नमान्नुले उसले दोहोरो मान्यता राखेको भन्ने अर्थ लाग्नेछ, जनताको मान्यतामा । बाबुराम भट्टराई र कमल थापाप्रतिको व्यवहारमा फरक मापदण्ड र व्यवहार आयोगले अपनाउँदा त्यसले आयोगको निष्पक्षता र न्यायिकतामा प्रश्न उठाउने अवसर दिन्छ । निर्वाचनको तयारी हुँदा आयोग निष्पक्ष बन्नुपर्छ र देखिनुपर्छ ।
०६३ पछिको पहिलो निर्वाचन आयोगका प्रमुखले पहिलो संविधानसभाको पूर्वसन्ध्यामा दिएको अभिव्यक्तिलाई अहिलेसम्म एउटा ‘अनियन्त्रित' र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका रूपमा हेरिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु अत्यन्त महत्ववपूर्ण दायित्व भएको र त्यसलाई सफल पार्नुपर्ने उनको कथनकै सिलसिलामा यसअघि भएका निर्वाचनले मुलुकको समस्या हल गर्न नसकेको निष्कर्ष पनि उनले सुनाए । के २०१५ देखि २०४८, ०५१, ०५६ का सबै निर्वाचन अर्थहीन सावित भए त ? अझ के ०६५ को संविधानसभाले सबै राजनीतिक समस्या हल गर्‍यो त ? कुनै पनि निर्वाचनले सबै भावी समस्याको समाधान दिन सक्तैन । तर हरेक निर्वाचन निर्वाचनजस्तै हुनैपर्छ । त्यहाँ सहभागी दलहरूले आयोगबाट समान व्यवहार र न्याय अनि प्रतिस्पर्धाको स्वीकार्य अवसर पाउनुपर्छ ।
राप्रपाले आयोगको निर्णय जलाएको छ । आयोगलाई त्यसमा समीक्षाको आवश्यकता छ भन्ने लागेमा त्यसको औचित्य निर्वाचन हैन, अहिले स्थापित हुनेछ बढी । त्योभन्दा बढी कुनै दलको विधान फेर्ने र त्यसमा थपघट गर्ने अधिकार आयोगलाई उपलब्ध छ कि छैन, त्यसको तत्काल समीक्षा गर्नु आवश्यक छ उसले ।
मंगलवार, साउन ३१, २०७४ महामारीपूर्व सजगता
सांसद नै ठगिन्छन् ट्याक्सी चालकबाट अरूको हालत के होला? 41374
अख्तियार जान प्रहरीमा होडबाजी 17358
नरेन्द्र मोदीमा डोभाल प्रभाव 11735
आंशिक प्राध्यापकले त्रिवि पदाधिकारी थुने 764
सर्पले टोकेर बालिकाको मृत्यु 612
मास हिस्टेरियाले विद्यार्थी हैरान, निको पार्न झाँक्री 8350
हेल्मेट नलाउने युवालाई प्रहरी हवल्दारले निर्घात पिटे 11502